Bosona kunuunsuun madaallii uumamaa eeguun gamatti madda galiitis
Bosona kunuunsuun madaallii uumamaa eeguun gamatti madda galiitis Featured
Bosona eeguufi kunuunsuun madaallii uumamaa eeguurra darbee madda galiitis
Jeeqamuun madaallii uumamaa irraa caalaatti kan dhaqqabu gocha dhala namaatiin. Bosona mancaasuun, aara summa’aafi dhangala’oo warshaalee garaagaraa keessaa gara naannawaatti yaa’anii akkasumas balfi gogaan to’annoo malee gara naannawaatti gad dhiifamu gochoota dhala namaa, madaallii uumamaa jeeqan keessaa isaan muraasa. Jeeqamuu madaallii uumamaan hongeefi dhibeewwan mudatan akkuma biyyoota biroo Itoophiyaas gatii guddaa kaffalchiiseera. Hongeen bara darbe biyyattiitti mudateefi lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxile akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama.
Yeroo ammaa rakkoo kana maqsuuf sochii garaagaraatu taasifamaa jira. Tibbanas dhimma kana ilaalchisee Instituutiin Qorannoo Bosonaafi Naannawaa Itoophiyaa qaama dhimmi ilaallatu hunda waliin Bishooftuutti marii taasisee ture. Daarekteerri Ittaanaa Instituutichaa Dooktar Ageenaa Aanjiloo akka jedhanitti, jeequmsa madaallii uumamaan qaamolee bishaaniis ta’e lafarratti rakkoon dhaqqabaa jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Keessumattuu, naannolee gammoojjii biyyattii keessatti sababa jijjiirama haala qilleensaan sanyiiwwan mukeen hedduu badaa jiru. Kana malees, haroowwan tokko tokko badiirraa ga’uun alatti kanneen faalamaaf saaxilamanis ni jiru. Rakkoon mudataa jiru kun Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa ijaarsarra jiruufis yaaddoo ta’uun hubatamee tarkaanfiin qorannoon deggerame fudhatamaa jira.
Hanga ammaatti faalama qilleensaa ittisuun alatti lafa lolaan dhiqame hedduu bosonoomsuun magariisa uwwisuun danda’ameera. Wantoota faalama naannawaa dhaqqabsiisuun madaallii uumamaa jeeqan xiqqeessuufis hojiin hubannoo uumuu bal’inaan hojjetameera. Ta’us ammayyuu hojii hedduutu hafa jedhu.
Mnisteera Naannawaa, Bosonaafi Jijjiirama Haala Qilleensaatti Ogeessa Bosonaa kan ta'an Doktar Tafarraa Mangistuu gama isaaniitiin akka jedhanitti, Itoophiyaa baay’ina bosonaafi haala qilleensaa mijata qabduun ofirra darbuun biyyoota ollaafuu kan geessudha. Ta’us hojii gahaa hojjechuu dhabuun jijjiirama haala qilleensaafi jeequmsa madaallii uumamaan dararamaa jirti. Yeroo ammaa misooma bosanaa qorannoon deggerame diriirsuun lafa bosonni dura irraa bade magariisa akka uffatu ta'aa jira. Hojiin misooma bosonaa cimee kan itti fufu taanaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa maqsuun alatti biyyattiin bu’aalee bosonaarraa galii guddaa kan argattu ta'uu dubbatu.
Doktar Alamaayyoo Nagaasaa Instituuticha bakka bu’anii waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Waraqaa qorannoo dhiyeessaniin akka jedhanitti, misoomni bosonaa qaamma bishaana’oo madaalli uumamaa eeguun alatti guddina dinagdeef shoora olaanaa qaba. Ta’us bakkeewwan hedduutti keessumaa naannoolee gammoojjiitti bosana ciruun qonnaaf oolchuun bal’inaan itti fufee jira. Amma garuu dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa xiqqeessuufi dhiqama biyyoos maqsuuf mukeen yeroo gabaabaatti ga’uun omishaafi dinagdee qonnaan bultootaa utuban dhaabamaa jiru.
Gama biraan ammoo meeshaa biyya Sudaanirraa bitame fayyadamuun omisha Ixaanaarraa galii guddaan akka argamu taasisaa jira kan jedhan Doktar Alamaayyoon, bifuma wal fakkaatuun sanyiiwwan leemmanii dhabamanii yeroo gabaabaa keessatti gabaaf dhiyaatan biyyoota garaagaraarra fiduun biyya keessatti madaqsuuf sochii taasifameen bu’aan jajjabeessaan argamaa jira.
Walumaa galatti, madaallii uumamaa sababa gocha dhala namaan jeeqamaa jiru maqsuuf sochiiwwan garaagaraa taasifamaa jiran cimanii akka itti fufan taasisuun rakkoolee gama kanaan dhaqqaban ittisuurra darbee dinagdee biyyattii guddisuu keessattis gahee olaanaa qabaata.
Torban kana/This_Week 12408
Guyyaa mara/All_Days 1821828